नेपालमा कोरोनाको विषयमा अमेरिकी अनुसन्धानः ४ महिनामा ४ लाख प्रभावित हुने – khabermala
नेपालमा कोरोनाको विषयमा अमेरिकी अनुसन्धानः ४ महिनामा ४ लाख प्रभावित हुने
Newportalmala २१ भाद्र २०७७, आईतवार १९:११	No Comments
अमेरिकाको वाशिंटन युनिभर्सिटीको स्वास्थ्य मापन तथा मूल्यांकन प्रतिष्ठानले आगामी जनवरी १ सम्म विश्वभर कोरोना भाइरस संक्रमणको अवस्था कस्तो हुनेछ भन्ने सन्दर्भमा एक प्रक्षेपण गरेको छ । त्यसमा नेपालको अवस्थालाई समेत समेटिएको छ ।
अहिलेकै अवस्था कायम रहेमा जनवरीको १ सम्म नेपालमा १२ हजार ७ सय ६३ जनाको ज्यान जाने उक्त प्रक्षेपणमा उल्लेख छ । अगस्त ३१ सम्म नेपालमा २२२ जनाको ज्यान गइसकेको र अक्टोबर २२ सम्म यो संख्या १ हजार ७ पुग्ने स्वास्थ्य मापन तथा मूल्यांकन प्रतिष्ठानको प्रक्षेपण रहेको छ ।
खासगरी नोभेम्बरको अन्त्यतिरबाट मृत्युदर ह्वात्तै बढ्ने अनुमान गरिएको छ । नोभेम्बर ३० सम्म ३२ सय ७५ जनाको ज्यान जाने र डिसेम्बरभरमा ९ हजारभन्दा धेरैको ज्यान जाने उक्त प्रक्षेपणमा जनाइएको छ ।
मास्कको प्रयोग गरेको खण्डमा भने जनवरीको १ सम्ममा नेपालमा जम्मा ४ हजार १० जनाको ज्यान जाने र झण्डै ९ हजारको ज्यान बचाउन सकिने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर अहिले पालना गरिएका मापदण्डहरु अझ खुकुलो बनाइएमा र मास्कको प्रयोग नगरिएको खण्डमा भने जनवरी १ सम्म नेपालमा कोरोना संक्रमणबाट १३ हजार २ सय ४१ जनाको ज्यान जाने अनुमान गरिएको छ ।
अगस्त ३१ सम्मको अवस्था हेर्दा औषतमा नेपालमा दैनिक १० जनासम्मको ज्यान जाने गरेकोमा डिसेम्बर २७ मा एकैदिन ४५० जनासम्मको ज्यान जानसक्ने प्रक्षेपण गरिएको छ । नोभेम्बर १२ सम्म पुग्दा दैनिक मृत्यु हुनेको संख्या ५० सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ । तर मास्क लगाउने र सामाजिक दुरी कायम गरेको खण्डमा दैनिक मृत्युदर १६५ भन्दा बढी ननाघ्ने अनुमान गरिएको छ । अहिलेकै मापदण्ड समेत पालना नगरिएको खण्डमा भने जनवरी १ सम्म मृत्युदर हरेक दिन ५ सय सम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
पढ्न छुटाउनुभयो कि ? प्लाज्माबाट कोरोना संक्रमितको उपचार सफलभएको निष्कर्ष, अमेरिकामा एफडीएबाट स्वीकृति प्रदान
स्वास्थ्य मापन तथा मूल्यांकन प्रतिष्ठानको तथ्यांकमा अहिले दैनिक संक्रमण पुष्टी हुनेको संख्या १ हजारको हाराहारीमा रहेको जनाइएको छ । तर दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या अहिले झण्डै ८ हजारको हाराहारीमा रहेको अनुमान गरिएको छ ।
यो संख्या डिसेम्बर १२ सम्ममा अधिकतम ३ लाख पुग्ने अनुमान गरिएको छ । अर्थात् उक्त दिन दैनिक ३ लाख संक्रमित हुने प्रक्षेपण गरिएको छ । तर मास्क लगाएको खण्डमा दैनिक संक्रमित हुनेको संख्या २ लाख २३ हजार भन्दा बढी ननाघ्ने अनुमान गरिएको छ । अहिलेका मास्क र सामाजिक दुरीमा मापदण्डहरु समेत पालना गर्न छोडेमा भने दैनिक संक्रमण ३ लाख ३५ हजारसम्म पुग्ने अनुमान गरिएको छ ।
अहिले झण्डै ११ हजारको हाराहारीमा नेपालमा कोरोना संक्रमितको परीक्षण गरिएको उक्त तथ्यांकमा उल्लेख छ । अहिलेसम्म नेपालमा १ हजार १२ बेडहरु उपलब्ध रहेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । तर डिसेम्बर २९ सम्म थप ३८ हजार बेड आवश्यक पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
त्यस्तै अहिले ११५ मात्र आईसीयु बेडहरु उपलब्ध रहेकोमा डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा साढे ७ हजार आईसीयु बेड आवश्यक पर्ने स्वास्थ्य मापन तथा मूल्यांकन प्रतिष्ठानले प्रक्षेपण गरेको छ । त्यस्तै डिसेम्बरको अन्त्यसम्ममा ६ हजार बढी भेन्टिलेटरको आवश्यकता पर्ने अनुमान गरिएको छ ।
अहिले नेपालमा झण्डै ६१ प्रतिशतलेमात्र मास्कको प्रयोग गरेको पाइएको छ । भारतमा भने ७२ प्रतिशतले मास्कको प्रयोग गरेको तथ्यांकमा उल्लेख छ । विश्वब्यापी रुपमा मास्कको प्रयोग ९५ प्रतिशत बनाउने लक्ष्य रहेपनि झण्डै ३९ प्रतिशत नेपालीहरुले मास्कको प्रयोग नगरेको पाइएको छ ।
अफगानिस्तान, पाकिस्तान र बंगालादेशको तुलनामा नेपालीहरुले बढी मास्क प्रयोग गरिरहेका छन् तर भारत, मालदिभ्स र श्रृलंकाको तुलनामा भने कमले मास्क प्रयोग गरिरहेका छन् । from Khasokhas.com
Previous Previous post: अमेरिकामा कोरोनाको भ्याक्सिन नोभेम्बर १ बाट वितरण गरिने
Next Next post: एनआरएन अमेरिकाज् क्षेत्रको क्षेत्रिय बैठक जारी, टोरोन्टो घोषणापत्र जारी हुने
Constitution’s vision and values: Are they implemented in letter and spirit? २१ भाद्र २०७७, आईतवार १९:११
काठमाडौंमा कोरोना बढ्दो : एकै दिन दुई हजार २० कोरोना संक्रमित थपिए २१ भाद्र २०७७, आईतवार १९:११
उद्योग वाणिज्य महासंघको महाधिवेशन अब मंसिर ११ र १२ गते हुने २१ भाद्र २०७७, आईतवार १९:११
संविधान सभाबाट संविधान जारी भएको पाँच वर्ष पूरा २१ भाद्र २०७७, आईतवार १९:११
अमेरिकी सर्वोच्च अदालतकी वरिष्ठ न्यायाधीश गिन्सबर्गको निधन २१ भाद्र २०७७, आईतवार १९:११
Why is Singapore’s COVID-19 death rate the world’s lowest २१ भाद्र २०७७, आईतवार १९:११